Proverb 3854 Marary mahatelin-kanina , ka ny aretina koa mila tohany. [Rinara 1974 #2134]
Proverb 3970 Maty tsikelikely toy ny aretin- dRenivalala . [Veyrières 1913 #2811, Cousins 1871 #1669]
Proverb 3993 Matory manana aretina toa didimaso . [Rinara 1974 #2195]
Proverb 4208 Mikatsakatsaka eran' izao loha rehetra izao, dia mahasitrana aretina an-doha ny sakamalao . [Veyrières 1913]
Proverb 4229 Milambam-bary hoatry ny aretin' Imamo , ka ny sisa tsy maty be kibo . [Veyrières 1913 #2881]
Proverb 4373 Mitango aretina , mitango lalitra . [Veyrières 1913 #3941]
Proverb 4415 Mitomany takon' ny olona : aretina an-doha no hita. [Veyrières 1913 #2632]
Proverb 4978 Ny aretina tsy maha-lehilahy . [Houlder 1895 #1993, Veyrières 1913 #2819]
Proverb 5026 Ny fahadalana hoatry ny aretin' androbe : vory vahoaka , vao manala baraka. [Veyrières 1913]
Proverb 5077 Ny faty mpanazakazaka ary ny aretina vadin-koditry ny olombelona . [Houlder 1895 #2095, Rinara 1974 #2975]
Proverb 5198 Ny iray alobotra tsy mahafatifaty , ny iray alofisaka tsy mahamailamailaka , ka aza mifanebaka fa samy aretina . [Rinara 1974 #3037]
Proverb 6076 Raha maloiloy mamy , tsy dikidiky fa aretina . [Rinara 1974 #235]
Proverb 6569 Sikidim-boka , ny tohan' aina : miziriziry , ny aretina toa hanapa-kozatra . [Rinara 1974 #3878]
Proverb 6916 Tao ny vaha-loha , fa ny aretina no tsy mamela mahazo . [Rinara 1974 #4115]
Proverb 7113 Toy ny aretin’ omby ny teny: izay mirehodrehoka ihany no ifindrany . [Cousins 1871]
Proverb 7237 Tomany eo imasony, toa mila fitia noho iza, tomany takona aretina an-doha no azo (fa tsy hitany). [Rinara 1974 #4170]
Proverb 7725 Tsy misy aretin- dratsy ohatra ny nendra , fa namoizako ny olo-malala . [Rinara 1974]
Proverb 8287 Voin-kava mahatratra, ny aretin- tsy lazaina mahafaka adidy . [Rinara 1974 #5009]
Proverb 8288 Voin-tenanao tsy namangy , fa ny aretiko sitran-tsy miody . [Rinara 1974 #5010, Cousins 1871 #3721]